Teerera uye Target Mikana pa Twitter neSocialCentiv | Martech Zone
Mazuva ese, vashandisi veTwitter mamirioni makumi maviri nemaviri vanotumira anopfuura mamirioni mazana mashanu emaTweets. Neseti chaiyo yemazwi, mabhizinesi anogona kugadzirisa vatengi vemuno. Icho hunyengeri kunzwisisa kuti ndeapi mazwi makuru anoshanda uye kuti hurukuro dzinoitika sei pa Twitter. Zvemagariro inoratidza vatengi vanotora tarisiro yavo kune chigadzirwa, sevhisi, kana zvemukati zvine chekuita nebhizinesi rako. Iwe unogona ipapo kuendesa vangangove vatengi nechinangwa chakanangwa, chakasarudzika chakagadzirirwa kukanganisa kwavo sarudzo yekutenga.
Munguva yegore ra2014 reNational Soccer League mwaka, vangangoita mamirioni mashanu evateveri venhabvu Tweeted nezve yavo yavanofarira timu. Uye yevatengesi vemitambo, iwo mamirioni mashanu mikana yekutengesa yega. Semuenzaniso, kutanga 5 yeaaive aive pamusoro peHouston Texans, senge iri pamusoro kubva @Mr_Polo. Aya maTweets anopa vashambadziri vemitambo mukana wakanakisa wekupindura zvakananga kune fan nekudzikisa uye zvinopihwa kumatikiti uye fan fan.
Kusarudza iko kusanganiswa kwemazwi akakosha kwakakosha kuti mushandirapamwe wekushambadzira ubudirire pane ino chikuva. Nekuti Twitter inobvumidza isingaenzanisike nzwisiso yemanzwiro evanhu panguva yakapihwa, vashambadziri vanofanirwa kutsvagisa mashandisiro anoita vatengi Twitter uye nekuvaka yavo yakakosha assortment zvinoenderana. Bernard Perrine, CEO we Zvemagariro
Gadzirisa Campaign Yako - Taera mushandirapamwe wako nemazwi akakosha uye kurudziro yekubatsira bhizinesi rako kukura.
Sevha Nguva & Mari - Tsvaga maTweets akakodzera kuti ugone kutaurirana chaiko nevanhu chaivo munguva chaiyo neruzivo rwavanoda pavanenge vachirida.
Yakagadziriswa Kudzidza - Nguva imwe neimwe paunopindura kune Tweet, SocialCentiv inodzidza uye inoyeuka ndedzipi mhando dzeTweets dzinonyanya kukoshesa bhizinesi rako.
Geographic Targeting - Svikira vatengi vakakodzera nekunyatso kujeka nekutarisa maTweets emuno.
Brand Kuziva - Bata pamwe vangangoita vatengi, uchiunza bhizinesi rako kwavari.
Kukurukurirana Pakarepo - Pakarepo "retweet", "tevera", "unofarira", uye "pindura" kune vangangove vatengi.
Insightful Analytics - Enzanisa hurukuro dzeTwitter nevatengi vachishandisa yakajeka, yemwedzi-kusvika-mwedzi kuongorora uye kutora matanho zvinoenderana nezvaunodzidza.
Mhinduro Dzakataurwa - Iyo software inopa mhinduro dzakapihwa kune vanyoreri kuti vataure nevatengi vanogona nekukurumidza uye nyore.
Rarama Batsigiro - Taura nevatsigiri vedu chero nguva iwe paine mubvunzo uchishandisa iyo SocialCentiv application.
MailChimp Kubatanidzwa - Chengetedza hukama hwako hwevatengi neyedu yakavakirwa-mukati kusangana neMailChimp inozvipinza otomatiki ruzivo rwevatengi kubva kuSocialCentiv.
Neseti chaiyo yemazwi, vatengesi vemitambo vanogona kuwana vatengi vemuno paTwitters - ine chiyero chakaratidzwa 50 muzana tinya-kuburikidza-chiyero! Icho hunyengeri kunzwisisa kuti ndeapi mazwi makuru anoshanda uye kuti hurukuro dzinoitika sei pa Twitter. SocialCentiv inoratidza vatengi vanoita Tweet vavariro yavo kune chigadzirwa, sevhisi, kana zvemukati zvine chekuita nebhizinesi rako. Iwe unogona ipapo kuendesa vangangove vatengi nechinangwa chakanangwa, chakasarudzika chakagadzirirwa kukanganisa kwavo sarudzo yekutenga.
Isu tinopa masevhisi akachengetedzwa, uko SocialCentiv inobata iko kwekusvikira nekutevera nevateveri paTwitter, pamwe neyekuzviitira-wega vhezheni yemakambani ayo anofarira kuzvitarisira ivo pachavo. Chero nzira, vatengi vedu vanowana chakasimba asi chinodhura chishandiso chinovabatsira kusvika vatengi nevatengesi mameseji panguva iyo vanhu vacho vanogamuchira zvikuru kuagamuchira. Bernard Perrine, CEO weSocialCentiv
Semuenzaniso, vangangoita mamirioni makumi maviri nemashanu vateveri vakatumira paTwitter nezvezvikwata zvavanofarira mukati megore rapfuura. Imwe yeaya anotungamira anotungamira, anomiririra fani ari kufunga nezvemitambo uye anogona kukurudzirwa kutenga matikiti, kana kapu yechikwata kana hembe, kana kupinda mukutsvaira. Zvemagariro inodhonza iwo ma tweets murwizi rwekudya uko timu inogona "@" kupindura zvakananga kuTwitter ine dhisikaundi "nudge" kutenga:
@NFLfan, isu tinemi - nhabvu mwaka haugone kutanga nekukurumidza. Kuti uve nechokwadi chekuti wagadzirira yako yekutanga tailgate, ko sei nezve 15% kubvisa chimwe chinhu mudura redu re fan? Dzvanya apa kuti uwane.
SocialCentiv inozivisa kuti yakawana huwandu hwe80 muzana muzana mumabhizimusi ayo ekutengesa emitambo. Iyo kambani inotenda kuti ndiko kudzoka kwekudyara icho chinokonzera kukura. Kune vamwe vatengi, SocialCentiv ine CPC iri pasi pe $ 1 uye yakawana CTR inosvika 42 - 52 muzana mubhizimusi rekushambadzira mumitambo. Kusvika pa ROI, vanyori vanoona avhareji 34 muzana yeTweeted discounts yakadhindwa kuti mutengi agone kudzikunura chipo.
Ongorora: Tiri mubatanidzwa we Zvemagariro.
Tags: NFLzvemagariro centivkutarisana nevanhuzvemagariro zvinopihwasocialcentivtwitter zvinokurudziratwitter kuteereratwitter inopa
Isu tinogara tichiteedzera nyowani nyowani kubva kune ino saiti network, kunyanya kune iwo mukana uye zvakare yekushambadzira chinangwa uchishandisa iyi social media.